1756-IF16 Allen Bradley, ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် - HuiTong စက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်
Allen က Bradley Panelview
QP ကြည့်ရန် & ထိန်းချုပ်ခြင်း
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Rockwell အလိုအလျောက် > Allen Bradley PLC > 1756-IF16
1756-IF16 Allen က Bradley
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်:Rockwell အလိုအလျောက် Allen က Bradley
ဖော်ပြချက်ControlLogix 16 Pt တစ် ဦး က / ငါ Module
အာမခံချက် -ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ 12 လ
Allen-Bradley 1756-IF16 သည်သီးခြားမဟုတ်သော analog current / voltage I / O module ဖြစ်သည်။ ControlLogix ကိုယ်ထည်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် 1756-IF16 သည် 1756-TBS6H သို့မဟုတ် 1756-TBCH အတွက် RTB သို့မဟုတ်ဖြုတ်တပ်။ ရနိုင်သော junction box ဝင်းလိုအပ်သည်။ အဆိုပါ input ကို module တစ်ခု 16 ရရှိနိုင်ပါအချက်များရှိပါတယ်။ အခြား modules များနှင့်မတူသည်မှာ 1756-IF16 သည်အသုံးပြုသူများအား modules များအားနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
အသုံးပြုသူနှင့်လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ 1756-IF16 ကိုနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်ကြိုးတပ်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောဝါယာကြိုး၊ differential wiring နှင့်မြန်နှုန်းမြင့် mode differential wiring ။ input device များအားလုံးကို grounded လုပ်သောအခါ single-end wiring တစ်ခုကိုအသုံးပြုသည်။ Controller အတွက်ဒီဂျစ်တယ်ဒေတာများထုတ်လုပ်ရန် module မှအသုံးပြုသော signal input ၏ဘေးနှင့် signal ground အကြားခြားနားချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ Single- အဆုံးသတ်ဝါယာကြိုး 16 ဖြည့်စွက်နိုင်ပါ။ လျှောက်လွှာဘုံမြေပြင်မရှိသို့မဟုတ်သီးခြား signal ကိုစွမ်းအားများရှိနိုင်သည့်အခါတစ် ဦး differential ကိုဝါယာကြိုးနည်းလမ်းအကြံပြုသည်။ ဤဝါယာကြိုးနည်းလမ်းသည်ဆူညံမှုကင်းလွတ်မှုကိုတိုးတက်ရန်လိုအပ်သောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်လည်းသင့်တော်သည်။ differential ကို mode မှာလိုင်းများကိုလုံးဝသီးခြားစီမရှိကြပေ။
1756-IF16 ရည်ညွှန်းမှုကိစ္စများ -
differential input input အချက်ပြများတွင်ကွဲပြားသော voltage ဘုံရည်ညွှန်းချက်များရှိပါက channel တစ်ခုသည်အခြား channel တစ်ခု၏ဖတ်ခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြစ်လာပါကအသုံးပြုသူသည် input ကိုအခြား module တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်သင့်သည် (သို့) အထီးကျန်မဟုတ်သော module တစ်ခုကိုသီးခြား input module တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးသင့်သည်။ ဒီ mode မှာ 1756-IF16 ကိုဆက်သွယ်မှုရှစ်ခုခွင့်ပြုပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့် mode differential wiring method သည် data update ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူသည်မြန်နှုန်းမြင့် mode ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အခြေအနေအချို့ရှိရမည်။ ပထမ ဦး စွာ differential wiring method ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ၊ ဒီ mode မှာ, module အပေါ်လေးလိုင်းများထဲကတစ်ခုသာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
1756-IF16 module ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမှာ ၂.၃ ဝပ်ရှိပြီး backplane ၏စုစုပေါင်းစွမ်းအားမှာ ၂.၃၃ ဝပ်ဖြစ်သည်။ ၀ င်ရောက်မှုအကွာအဝေးသည် ၀ ၁၀ မှ volts၊ ၀ မှ ၅ ဗို့မှသို့မဟုတ်0မှ 20 mA မှ± 10 Volts ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ module ကို၏လက်ရှိပုံ 5. 1 V ကို 150 mA, ဒါမှမဟုတ် 24 V ကို 65 mA ဖြစ်ပါတယ်။ backplane ၏ voltage နှင့် current သတ်မှတ်ချက်များသည် DC 5.1 V၊ အများဆုံး 150 mA, အများဆုံး DC 24 V, 65 mA ဖြစ်သည်။ input current range သည်4to 20 mA၊ input voltage range သည် -10 to 10 V ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် 100VA အထိကန့်သတ်ထားသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂.၃ ဝပ်နှင့်လက်ရှိသုံးစွဲမှုမှာ ၃.၉ ဝပ်ဖြစ်သည်။
1756-IF16 ဗို့အားတွင်အပူဓာတ်သည် ၇.၈၄ BTU / တစ်နာရီရှိပြီး ၁၃.၃ BTU / တစ်နာရီနှုန်းရှိသည်။ ၎င်းတွင် overvoltage protection သည် 30 V DC (voltage) နှင့် 8 V DC (current) အထိကာကွယ်ထားသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂.၃ ဝပ်နှင့်လက်ရှိသုံးစွဲမှုမှာ ၃.၉ ဝပ်ဖြစ်သည်။ အပူ၏အပူဖြန် 7.7 BTU / တစ်နာရီဖြစ်ပြီးလက်ရှိ 13.3 BTU / တစ်နာရီဖြစ်သည်။ 1756-IF16 တွင် overvoltage protection သည် 30 V DC (voltage) နှင့် 8 V DC (current) အထိကာကွယ်ထားသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂.၃ ဝပ်နှင့်လက်ရှိသုံးစွဲမှုမှာ ၃.၉ ဝပ်ဖြစ်သည်။ အပူ၏အပူဖြန် 7.7 BTU / တစ်နာရီဖြစ်ပြီးလက်ရှိ 13.3 BTU / တစ်နာရီဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် overvoltage protection သည် 30 V DC (voltage) နှင့် 8 V DC (current) အထိကာကွယ်ထားသည်။
ဘယ်တော့မှရောင်းမရပါအပိုင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတာ ၀ န်ကိုယူပြီးဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဂိုဒေါင်3နှင့်လုံခြုံရေးစတော့ရှယ်ယာဒေါ်လာ ၂.၅ သန်း USD Allen Bradley Parts!
Hot Tags: 1756-IF16 Allen Bradley, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်း၊ ဝယ်၊ တရုတ်၊ ဈေးနိမ့်၊ ဈေးတန်း၊ ဈေးနှုန်း
Allen Bradley 1756-IF16Rockwell အလိုအလျောက် 1756-IF16
လိပ်စာ: E303, Silicon Valley Building T1, Qing Quan Rd LongHua Shenzhen China
1766-L32BWA CPU ကို
Copyright ©မူပိုင်ခွင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ HuiTong စက်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက်ကမူပိုင်ခွင့်များရယူထားသည်။